Ultrabooks: inotenga gwara kune vanofarira ehuremu zvinyorwa zvemabhuku | Linux Vakapindwa muropa
Ultrabook Laptops: Iyo Yekutenga Gwara kune Vakareruka Laptop Vanoda
Isaac | | Resources
Zvishoma nezvishoma, malaptop ave kudzinga makomputa emakomputa. Kwete chete yekufamba kwayo, asiwo nemitengo yayo. Kunyanya ultrabooks, makomputa ayo akaonda zvakanyanya, akareruka, uye nepamusoro kuzvitonga kuitira kuti iwe ugone kuishandisa chero kwaunoda. Pamusoro pezvo, kufambira mberi kutsva muhunyanzvi hwekuita tekinoroji kunoita kuti mashandiro asisiri dambudziko kune akawanda anorema basa kunyorera.
Hunhu uhwu hwakazadzisa izvo, kubva pakuonekwa kwavo pamusika muna 2011, vakakunda chikamu ichi, vari zvikwata anotengesa zvakanyanya malaptop parizvino. Uye kana iwe uri kuda kumutsiridza yako Hardware uye kuyedza mabhenefiti eaya ultrabooks, hezvino zvese zvaunoda kuti uzive kuti usakanganisa mune sarudzo ...
1 Izvo iwe zvaunoda kuziva kuti usarudze akanakisa maabooks
1.3 Kuzvimiririra uye kufamba
2 Kutenga sarudzo
Izvo iwe zvaunoda kuziva kuti usarudze akanakisa maabooks
Kuti yako ramangwana laptop ive yakarongedzwa mukati meiyo ultrabooks, inoda sangana nemhando dzakateedzana. Izvo zvinoitika nekuti yakatetepa, yakajeka, ine kuzvitonga kuzere, uye kuita kwakanaka. Kuti izvi zvigoitika, unofanirwa kuzvimisikidza nhevedzano yezvinodiwa seinotevera ...
Izvi zvinoshamisa zve mobile technology havafanirwe kuwedzerwa mutengo. Kunyangwe paine mamwe anodhura mamodheru, iwe unogona zvakare kuwana zvimwe zvigadzirwa kubva kune akanaka kwazvo mabrandi, senge iwo aunowana mairi InfoComputer. Chitoro chinopa vimbiso pane zvese zvigadzirwa uye pakati pazvo paunowana zvakachipa, zvechipiri-ruoko uye zvakagadziridzwa zvigadzirwa. Hukuru hwezvibvumirano muhunyanzvi hwausingafanire kurerutsa kuitira kuti usaise mari kupfuura yaunokwereta.
Para sarudza yakanaka ultrabook modhiIwe unofanirwa kungo tarisa pane zvakafanana hunyanzvi hunhu hwaungatarise kune chero imwe mhando yemidziyo. Zvinoti:
CPU: iyo microprocessor chinhu chakakosha kwazvo. Inofanira kunge iri imwe yeU-Series shanduro (yakanyanya kuderera kushandiswa) kubva kuIntel kana AMD, ndokuti, avo vane U mushure meiyo chip modhiyo kuverenga. Semuenzaniso, iyo Intel Core i7-7700U. Izvo zvichave nechokwadi chekuita kwakanaka neinodzika inogoneka bhatiri kushandiswa
RAM- RAM inofanira kunge iri DDR4 kana LPDDR4. Musiyano uripo pakati peumwe neumwe ndewekuti wechipiri une nani simba rekushandisa, zvichiita kuti bhatiri rigare kwenguva yakati rebei, asi rinozotengeswa kubhodhi uye hauzokwanise kuiwedzera Panyaya yekugona, inofanirwa kuve ingangoita 8GB.
GPUUltrabooks inowanzo kuve neyakaunganidzwa GPU, uye hazviwanzo kuona imwe ine yakazvipira. Mazhinji maIntel machipisi ane simba zvine mutsindo pabhodhi maGPU, kunyangwe ma AMD APU angave ari nani graphic mune izvi.
Screen: kazhinji ivo vanowanzo kuve nema skrini anoenda kubva gumi kusvika 10 ″. Izvi zvinovaita kuti vawedzere kuomarara uye inochengetedza bhatiri nekusave nesimba remapani akakura kudaro. Nekudaro, kana iwe uchida chimwe chinhu chinopfuura icho, unogona kuvawana iwo 13 ″ kana 14 ″ kana iwe uchida chimwe chinhu chakakura. Semuyenzaniso, Kuburitswa kwaHuawei kwazvino muenzaniso wakajeka weaya mashura maunogona kuwana akanakisa e ultrabooks ane makuru ma skrini kuitira kuti iwe ugone zvirinani kunakidzwa zvinoonekwa zvemukati. Kunyanya, iyo MateBook D 15 ine 15-skrini, ine kuita kwakanyanya kweiyo AMD Ryzen 5 3500U, Ultra-inokurumidza SSD, 16 GB yeDDR4 RAM, uye ine simba kwazvo Radeon Vega 8 GPU inokusiya usingatauri.
Self Storage- Yemazuva ano ultrabooks anowanzo ave akasimba mamiriro akaomarara anotyaira, senge maSSD. Nekudaro, kuchine mamwe ane ma mechanical HDDs. Ramba uchifunga kuti maSDD anokurumidza kwazvo, achibvumira kutanga nekukurumidza uye kuvhurwa kwemaapp. Kana iri yekugona, ini ndinokurudzira kuti ive ingangoita 256 GB. Zvikasadaro inokurumidza kuve diki kwazvo kwauri ...
vamwe: mamwe eabookabooks anoshandurwa kana kushandurwa, ndokuti, makomputa ane skrini inogona kubviswa kubva kubhobhoyo kuti ishandise mukubata modhi sepiritsi. Chinhu chinogona kubatsira kana iwe uchida kushanda pasina keyboard mune mamwe mamiriro.
ari ultrabook zvigadzirwa ivo vakakosha kuwana chigadzirwa chemhando yepamusoro. Pakati pezvakanakisa zvigadzirwa pane HP, Acer, ASUS, Dell, Huawei, Xiaomi, uye Lenovo. Nemhando idzi hausi kuzokanganisa, nekuti ivimbiso yekuti une chigadzirwa chedeneti.
Kuzvimiririra uye kufamba
Icho chikamu chakakosha kwazvo mumalaptop, asi zvakanyanya kunyanya muma ultrabooks. Zvikwata izvi zvinoonekwa nekuve ne kufamba kwakakwirira uye kugona kwakanyanya. Ndiko nekuti ivo vatete, vakareruka uremu, uye bhatiri ravo rinogara kwemaawa mazhinji. Ita shuwa kuti ndozvinoitika pakusarudza timu yako.
Nezve kuzvimiririra, zvinofanirwa kudaro maawa makumi maviri nemana. Iyo nhamba inotoonekwa seyakanaka kune iyo ultrabook. Ramba uchifunga kuti zvinoenderana zvakanyanya pahukuru hwechidzitiro, mashandiro ehurdware awasarudza mukugadzirisa kwako, uye iro bhatiri kugona (mAh). Bhatiri re, semuenzaniso, 4000 mAh, rinoratidza kuti rinogona kupa simba kune Hardware ye4A kweawa rimwe chete, kana 8A kwemaminetsi makumi matatu, kana 30A kwemaawa maviri, zvichingodaro.
Ive nekuchenjerera, sevamwe vagadziri vanowanzo tsanangudza iyo bhatiri kugona kushandisa Wh, ndiko kuti, watts paawa. Ichi chiyero chakafanana, asi chinoratidza iro basa raunogona kuita pachikamu chenguva. Semuenzaniso, 40Wh zvinoreva kuti inogona kupa simba re40w kweawa rimwe chete, saka, kana yako Hardware ikadya 5w, inogona kutora maawa masere.
En maererano uremu uye kukuraIwe haufanire kunyanyisa kufunga kana, asi ramba uchifunga kuti kuitira kuti vasazokupa katsi mahara, iyo ultrabook inofanira kurema isingasviki 1.5 Kg.
Usabvunze elm mapere. Hazvisi zvese zvinogona kuve nazvo. Kana iwe uchitsvaga iyo laptop ine yakatetepa zviyero uye mwenje, saka hazvisi kuzove nehukuru kubatana. Icho chikonzero ndechekuti zvidimbu zvavo zvakaonda uye zvidiki zvekuti havangakwanise kutakura huwandu hukuru hwezviteshi semamwe mabhuku makuru emabhuku.
Zvisinei, izvi kazhinji haisi dambudziko kune vazhinji vashandisi. Nemachiteshi ane aya ma-ultrabook anayo anopfuura zvakakwana, uye mamwe akashata iwe aunogona kushandisa adapta kuti uwedzere kugona kwemamwe madoko akadai seUSB ...
ari mikana pakutenga ultrabooks pane akati wandei. Uye sezvo iwe uchikwanisa kusarudza pakati pesarudzo dzakasiyana, iwe unofanirwa kuvaita pachena kubvisa kusava nechokwadi kwese. Ini pachezvangu ndinokurudzira zvinotevera:
ItsvaKana iwe ukasarudza pane itsva ultrabook, iwe unovimbisa kuti haisi kushandiswa, iri mune yakakwana mamiriro, iine yakazara yakazara yekutanga garandi uye kuti iri yazvino modhi ine yazvino tekinoroji.
Yakashandiswa / Ruoko rwechipiriZvinogona kwete kugara uchibhadhara kutenga new ultrabook. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuti irwe uye iwe usade kuisa panjodzi yekukanganisa nyowani, kana kana iwe uchida timu ine simba nemutengo uri nani, nezvimwe.
Yakadzorerwa: iri sarudzo yepakati pakati pezviviri zvakapfuura. Kazhinji zvigadzirwa zvitsva kana zvakagara zviripo zvakagadziriswa mune dzimwe nguva kana kuiswa zvakare uye kuiswa kutengesa zvakare, kungave nekuda kwekukanganisa kwefekitori, kudzoka kwevatengi, zvigadzirwa zvinoratidzwa muzviratidziro zvezvitoro, kukuvara kudiki kwakagadzirwa panguva yekufambisa., etc. Iyi midziyo inovimbiswa uye haiwanzo kuratidza zviratidzo zvekushandisa. Muzviitiko izvi iwe unogona kuwana zvakanaka zvibvumirano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Ultrabook Laptops: Iyo Yekutenga Gwara kune Vakareruka Laptop Vanoda
Tartube, mutengi multiplatform vhidhiyo services mutengi iyo yatinogona kuona, kurodha mavhidhiyo uye nezvimwe zvakawanda
GamerOS: nyowani yekushandisa sisitimu yemavhidhiyo